ရွှေ​လား ငွေ​လား သေချာ​စဉ်းစား | J-Myanmar
phyo — Mar 16, 2015
မြန်မာ​နိုင်ငံ​က​နေ ခရီး​ထွက်​တော့​မယ်​ဆို​တော့ ပစ္စည်း​ပစ္စယ​တွေ​ထုတ်​ပိုး​ရင်း လက်​ဝတ်​ရတနာ​တွေ​ကို ဘယ်​လို​သယ်​သွား​မ​လဲဆို​တာ ဝေခွဲ​ရ​အခက်​ခဲ​ဆုံး ကိစ္စ​တစ်​ခု ဖြစ်​ခဲ့​ရ​တယ်။ ရန်ကုန်​အိမ်​က​နေထွက်​တော့ သယ်​ချင်​သ​မျှ ရွှေ​ထည်​တွေ ( သိပ်​မ​များ​ပါ ) .. ခန္ဓာ​ကိုယ်ပေါ်​မှာ ဆင်​မြန်း​ပြီး​သကာ​လ ကျွန်တော်​တို့​ဇနီးမောင်နှံ​ဆို​တာ ရပ်​တကာ ရွာ​တကာ​ဖိတ်​ထား​တဲ့​အလှူ​ပွဲ​ကို​သွား​တဲ့ တော​သူကြီး​လင်မယား​ပုံစံ ပေါက်​နေ​ပါ​တော့​တယ်။ တာဝန်​ကျ​လေ​ဆိပ်​စောင့် ရဲ​မေ​က ဒီ​အထာ​သိ​တော့ ကျောက်​တွေ​ပါ​တဲ့ လက်​ဝတ်​တွေ​ကို အသေ​အချာ​စစ်ဆေး​နေ​ပါ​တယ်။
ကိုယ်​က​လည်း ခရီး​စဉ်​ဖြောင့်​ချင်​တာ​ကြောင့် ဒီ​အခက်​အခဲ​ကို ကျော်​ဖြတ်​ဖို့ မြန်​မာ့​နည်း​မြန်​မာ့​ဟန်​နဲ့ ဘယ်​လို​ဖြေ​ရှင်း​ရ​မယ်​ဆို​တာ မ​သိ​တာ​မဟုတ်​ပါ .. သိ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ​နေ​ခဲ့​တဲ့​သက်​တမ်း​တစ်​လျှောက်​လုံး ဝန်​ထမ်း​တွေ​ကို အဆိပ်ပင်​ရေလောင်း​သ​လို အားပေး​အား​မြှောက် ဆက်​မ​လုပ်​ချင်​တော့​တာ​ကြောင့် ဘာ​မှ​မ​ပေး​ပဲ နေ​လိုက်​တယ်။ အဲ​ဒီ​အခါ​ကျ အထက်​လူကြီး​ကို​ဖုန်း​ဆက်​တော့ အမျိုးသမီး​ရဲ့ စိန်​ဆွဲ​သီး​က ယူ​လို့​မ​ရ​ဘူး​ပြော​လို့ လိုက်ပို့​သူ​နဲ့ ပြန်​ထည့်​ပေးလိုက်​ရ​ပါ​တယ်။ ငွေ​ရှိ​လို့​မဟုတ်​သ​လို ရွှေ​ရှိ​လို့​လည်း မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ တစ်​ခါ​မှ​မ​ရောက်​ဖူး​တဲ့ အမေ​ရိ​ကား​ဆို​တဲ့​နိုင်ငံ​ကို​သွား​ဖို့ အိမ်​ပြောင်း​တာ​ထက်​မ​လျော့​တဲ့ ရွှေ့​ပြောင်း​သယ်ယူ​မှု​တွေ လုပ်​ခဲ့​ရ​တဲ့​သဘော​ပါ။
အမေ​ရိ​ကန်​မြေ​ဆီ​လွှာ​ကို​နင်း​တော့ အထင် နဲ့ အမြင်​က တစ်​ခြား​စီ​ဆို​တာ သိ​လာ​တယ်။ ဒီ​နေရာ​သစ်​မှာ လူ​တွေ ရွှေမ​ဝတ်​ကြ​ဘူး။ မြန်မာ​တွေ​လို တို့​လို့​တွဲ​လောင်း​ဝတ်​တာ ဘာ​မှ​မ​ရှိ​ဘူး။ တွေ့​ဖူး​သ​မျှ​ကတော့ ရွှေဖြူ​ပါး⁠ပါး​လေး နဲ့ လက်​စွပ်​ဖြူ​လေး​နဲ့။ တစ်​ချို့​မိန်း​ကလေး​ငယ်​လေး​တွေ​ကျ ဟမ်း​ချိန်း​သေး⁠သေး​လေး​ဝတ်​တာ​မျိုး ဒီ​လောက်​ပဲ ဝတ်​ကြ​တယ်။ ဒီ​တော့ ကျွန်တော်​တို့​ယူလာ​တဲ့ ရွှေ​တွေ​က ဥစ္စာ​ခြောက်​ဖို့​က​လွဲ​ရင် ဘာ​အသုံးကျ​ဦး​မှာ​လဲ? အဲ​ဒါ​နဲ့ ကျေးဇူးရှိ​တဲ့​အစ်မ​ကို အကူအညီ​တောင်း​ပြီး သူ့​ဘဏ်​က သံသေတ္တာ – Locker ထဲ​မှာ​သိမ်းထား​ဖို့ သွား​အပ်ထား​ရ​တယ်။ အိမ်​မှာထား​ရင်​လည်း လူကြီး​တွေ​က​အလုပ်​သွား၊ ကလေး​တွေ​က​ကျောင်း​သွား နဲ့ စိတ်ချ​ရ​ပုံ​လည်း မ​ရှိ​ဘူး​ဆို​တော့​လေ။ ဒါ​က ရောက်​ပြီး​မှ ကြုံ​ရ​တဲ့ ရွေ ဝတ်​မ​ရ​တဲ့ ဒုက္ခ။
မ​လာ​ခင်​ကတော့ ကျေးဇူးရှိ​တဲ့​အစ်မ​လင်မယား​ကို “ ကမ္ဘာ့​ရွှေ​ဈေး​ကျ​ရင် ဝယ်​ပေး​ပါ​လား​လို့ ” ပြော​ဖူး​တယ်။ တရုတ်တန်း​ဖက်​မှာ​တော့ ရွှေ​ဆိုင်​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​တယ်၊ ငါ​တို့​တော့​မ​လုပ်​တတ်​ဘူး၊ နင်​လည်း လာ​တော့​မှာ​ပဲ​လေ၊ ရောက်​မှ​ပဲ နင်​ကိုယ်တိုင် လေ့​လာ​ကြည့်​လို့​ပြော​လို့ စိတ်လျှော့​ခဲ့​ရ​တယ်။ သူ​တို့​ပြော​တဲ့​မြို့​က ရွှေ​ဆိုင်​တွေ​ရောက်​တဲ့​အခါ ဈေး​ကွက်​က မ​တူ​တာ​ကို သိ​လာ​တယ်။ အဲ​ဒီ​မြို့​က လူ​မည်း​အရမ်း​များ​သ​လို အနောက်​ဖက်​ခြမ်း​ပင်​လယ်အော်​ဒေသ​မှာ ထစ်​က​နဲ သေ​နတ်​ပစ်​ရင် သေချာ​တယ် .. ဒီ​နေရာ​ပဲ။ သူ့​တရုတ်တန်း ပတ်​ပတ်လည်​မှာ Victorian House လို့ခေါ်​တဲ့ ရှေ့​လှေ​ခါး​ဖွင့် ရှေး​ဟောင်း​အိမ်​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​တယ်။
နောက်ထပ်​လူ​မျိုး​တစ်​မျိုး​က ဗီယက်နမ်​တွေ..။ လူ​မည်း​တွေ​နဲ့​အပြိုင် တစ်​ချိန်​က လက်​ကြမ်း​ဇက်​ရမ်း​ခဲ့​လို့ ဟော​လီ​ဝုဒ်​မင်းသား​ကြီး က​လင့်​အိ​စ​ဝု ကတောင် ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​ဖို့ ကြော​ရိုး​ယူခဲ့​ရ​တဲ့ နေရာ​မျိုး​လေ။ အသိ​တစ်​ယောက်​က အုတ်​က​လံ​မြို့​က တရုတ်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​မှာ ရွှေ​ချောင်း​ဝယ်​ပြီး ရန်ကုန်​ပို့​တယ်​လို့​တော့ ကြား​ဖူး​တယ်။ ဘယ်​လို ဘယ်​ပုံ လေ​ဆိပ်​တွေ​ကို ကျော်​ဖြတ်​တယ်​တော့ ကျွန်တော် ဥာဏ်​မ​မှီ​တော့ ဆက်​ရေး​ဖို့ မ​ရဲ​တော့​ပါ။ ဒီ​နေရာ​မျိုး​မှာ ကျွန်တော် ရွှေ​ချောင်း​ဝယ်​ပြီး ဈေး​တက်​ရင် ပြန်သွား​ရောင်း​ဖို့ စိတ်ကူး​ကို ဘယ်​လို​မှ အခန်းမ​ဆက်​နိုင်​ခဲ့​ပါ​ဘူး။
ဒီ​လို​နဲ့ ဒီ​ဘက်​နိုင်ငံ​ကို​ကြို​ပို့​ထား​တဲ့ ငွေ​သေ​တွေ​လဲ ထန်းလျက်​ခဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း​ခွေး​လျက်​သ​လို ကုန်​နေ​ရင်း​က ရွှေ​ဝယ် ရွှေ​ရောင်း အကြောင်း လေ့​လာ​ကြည့်​မိ​တယ်။ အမေ​ရိ​ကန်​တစ်​ချို့ နဲ့ ရွှေ​စု​သူ​တွေ ဝယ်​ကြ​တဲ့ ရွှေ​အများ​စု​က အွန်​လိုင်း က​ပါ။ စက်​ဖြတ်​ရွှေ​ချောင်း၊ ပုံ​လောင်း​ရွှေ​ဒင်္ဂါး နဲ့ အထိမ်းအမှတ်​ရွှေ​ပုံဆောင်​ခဲ၊ လက်​ဝတ်​ရတနာ ဆို​ပြီး အကြမ်း​အား​ဖြင့် ( ၄ ) မျိုး လောက် မှတ်ထား​လို့​ရ​တယ်။ အဲ​ဒါ​တွေ​ထဲ​က​နေ ထုတ်​နှုတ်​ပြ​ရ​ရင် ..
www.apmex.com ( အက်ပ်​မက်စ် ဟု ဖတ်​ပါ​သည် )
American Precious Metals Exchange – APMEX စာ​မျက်နှာ​က ရွှေ​ချောင်း – Bullion တွေ​နဲ့ ကမ္ဘာ​အရပ်​ရပ်​က ရွှေ​ဒ​ဂါၤ​မျိုး​စုံ​ရ​တာ တွေ့​ရ​တယ်။ ရွှေ​သမား ဝဘ်​ဆိုဒ်​ထဲ​မှာ ဈေး​အကြီး​ဆုံး​ဖြစ်​သ​လို ဆရာ​ကြီး သ​ဘာ​ကြီး​နေရာ​ကလူ​တွေ အရောင်းအဝယ်​လုပ်​ကြ​တယ်။ iTune နဲ့ Google Play Store မှာ ဖုန်း​နဲ့​သုံး​ဖို့ App တွေ တင်​ထား​တာ တွေ့​ရ​တယ်။
အမေ​ရိ​ကန်​က နာမည်ကြီး အမေ​ရိ​ကန်​အီး​ဂဲလ် – American Eagle ၊ လူ​ရိုင်း​ခေါင်း​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​ပြား – Gold Buffalos ၊ ၁​၉⁠၉​၃ ခု​နှစ်​မ​တိုင်​ခင်​က​ရွှေ​ပြား – Pre-1993 US Gold စ​တာ​တွေ ရှိ​တယ်။
က​နေ​ဒီ​ယမ်​ရွှေ​ပြား​တွေ​မှာ​တော့ နိုင်​ငံ့​ပုံ​ရိပ်​ဖြစ်​တဲ့ သကြား​ရွက် – Maple Leaf က လူ​ကြိုက်​အများ​ဆုံး​ဖြစ်​သ​လို ဈေး​အမြင့်​ဆုံး​ပေး​ရ​တဲ့ ရွှေ​ဈေး​မျိုး​ပါ။ က​နေ​ဒါ​တရုတ်တန်း​က ကမ္ဘာပေါ်​မှာ အကြီး​ဆုံး​ပါ။ ဒါ​ကြောင့် တရုတ်​လူ​မျိုး​အကြိုက် နှစ်​သစ်​ကူး – Lunar Gold Coin တွေ ထုတ်​ရောင်း​တယ်။ အခု​နှစ် ( ၂​ဝ​၁​၅ ) ဆိတ်​ပုံ ယူ​မ​လား? ( ၂​ဝ​၁​၄ ) မြင်း​နှစ်​အမှတ်တရ ရွှေ​ဝယ်​စု​မ​လား? ရွှေ​ထည့်​တဲ့​ဗူး​ပါ​လိုချင်​ရင် ( ၁​၅ ) ဒေါ်​လာ​ထပ်​ပေး​ရင် တစ်​ပါ​တည်း​ဝယ်​လို့​ရ​ပါ​သေး​တယ်။ ဒီ​အုပ်စု​ထဲ​က​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​တွေ လိုချင်​ရင်​တော့ Royal Canadian Mint Gold Lunar Coins – RCM Gold Lunar Coins လို့ ရှာ​ရင် တွေ့​နိုင်​ပါ​တယ်။
မက္က​ဆီ​ကို​ဟာ တစ်​ချိန်​က ရွှေ​ကြောပေါ်​မှာ​တည်ထား​တဲ့ နိုင်ငံ​ပါ။ စ​ပိန်​ကို​လို​နီ​ခေတ်​တစ်​လျှောက် ရွှေ​တွေ ကုန်​သ​လောက် ဖြစ်​ခဲ့​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် လွတ်လပ်​ရေး​ရ​ပြီး​တဲ့​အခါ အောင်မြင်​မှု​အထိမ်းအမှတ်​နဲ့ လွတ်လပ်​ရေး​နတ်​သမီး​ပုံ​ဟာ နိုင်​ငံ့​ကိုယ်စား​ပြု​ပုံ​ရိပ်​ကို မြတ်နိုး​ကြ​တယ်။ မြောက်​အမေ​ရိ​ကတိုက်​မှာ​တောင် ရှား​ရှားပါး​ပါး​တွေ့​ရ​တဲ့ မက္က​ဆီ​ကို​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​တွေ​ကို APMEX မှာ ရ​နိုင်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​အထိမ်းအမှတ်​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​တွေ ဝယ်​ချင်​ရင်​တော့ Libertads ဆို​တဲ့ နာမည်​ကို သိ​ထား​မှ ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ရွှေ​ဒ​ဂါၤး ရဲ့ ရှေ့​မျက်နှာစာ​မှာ လွတ်လပ်​ရေး​နတ်​သမီး​ဟာ မီး​တောင်​နောက်​ခံ​နဲ့ ပျံ​နေ​တဲ့​ပုံ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နောက်​ကျော​မှာ သိန်း​ငှက် က မြွေ​ကို တိုက်​ပွဲ​နိုင်​နေ​တဲ့​ပုံ​က​လည်း သူ​တို့​သမိုင်း​ကြောင်း​နဲ့​သူ​တို့ ရှိ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
ထုံးစံ​အတိုင်း ဩ​စတေး​လျ​အထိမ်းအမှတ်​ရွှေ​ဒင်္ဂါး ဝယ်​ချင်​ရင်​တော့ သား​ပိုက်​ကောင် ပုံ​လေး​နဲ့ ရ​မှာ​ပါ။ ရွှေ​ပြား နဲ့ ဝယ်​ချင်​ရင်​တော့ Gold Bar လို့ ခေါ်​ပါ​တယ်။ ရောင်း​သူ​က နာမည်​ပေး​တာပေါ်​မူ​တည်​ပြီး Perth Mint လို့ ခေါ်​တာ​လည်း ရှိ​ပါ​သေး​တယ်။ ဒီ​လို​အပြား​လေး​တွေ​ကို ရွှေ​ချိန်​အနည်း​ဆုံး ( ၁ ) ဂ​ရမ် က​နေ ( ၁​ဝ​ဝ ) ဂ​ရမ်​ချိန်​အထိ ရှိ​သ​လို အောင်​စ နဲ့​ဆို ( ၁​ဝ ) အောင်​စ​ပြား​တစ်​ပြား​ကို ဒေါ်လာ ( ၁​၂​ဝ⁠ဝ​ဝ ) ကျော် ပေး​ရ​မှာ​ပါ။ ရွှေ​ခေတ်​တစ်​ခေတ်​ဆန်း​ခဲ့​တဲ့ ပါ့သ် မြို့​ရဲ့ ရွှေ​တွင်း​သမိုင်း​ကိုယ်စား​ပြု ဘဲ​ငန်း​ပုံ​ရွှေ​ပြား ( လေးထောင့်​ပြား ) အားလုံး​ဟာ ရောင်း​ကတည်းက မှတ်​ကျောက်​တင်​ပြီး​သား – ( In Assay ) စာတန်း​ပါ​မှ သူ​တို့​အမှတ်​တံဆိပ်​အဖြစ် စိတ်ချ​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ တစ်​ခြား​အထိမ်းအမှတ်​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​တွေ​လည်း အများ​ကြီး​ရှိ​ပါ​တယ်။
ဗြိ​တိန်​ဘုရင်​မ​ကြီး​ပါ​တဲ့​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​ယူ​မ​လား? ဝင်​စ​တန်​ချာ​ချီ​ပါ​တဲ့​ပုံယူ​မ​လား? ရ​ပါ​တယ်။
တရုတ်​နိုင်ငံ​အထိမ်းအမှတ် ပင်​ဒါ​ဝက်ဝံ​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​တွေ​ဆို​လည်း ဒီ​မှာ ရှိ​ပါ​တယ်။ ကျောင်း​ဆောင်ပုံ နဲ့ အောက်​မှာ ခု​နှစ်​သက္ကရာဇ်​ထိုး​ထား​တဲ့ ဒ​ဂါၤး​ဝိုင်း​တွေ​လည်း အများ​အပြား​ပါ​ပဲ။ နှစ်​သစ်​ကူး​ကိုယ်စား​ပြု အကောင်​မျိုး​စုံ သူ့​နှစ်​နဲ့​သူ ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​တွေ​လည်း အစုံ​ရ​ပါ​တယ်။ တရုတ်​နိုင်ငံ​ဗဟို​ဘဏ်​ကိုယ်တိုင်​လောင်း​ထား​တဲ့ ချိတ်​ပိတ် ပင်​ဒါ​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး​ဆို​ရင် ပေါက်​ဈေး​ထက် ပို​ပေး​ရ​မှာ သေချာ​ပါ​တယ်။
နောက်ထပ်​နိုင်ငံ​တွေ​ထဲ​မှာ အစ္စရေး​ရှေး​ဟောင်း ဗျက်​စောင်းတီး​ရွှေ​ဒ​ဂါၤး ရှိ​ပါ​တယ်။
ပြင်​သစ်​က အီ​ဖယ်မျှော်​စင်​ရွှေ​ဒင်္ဂါး၊ ကံကောင်း​ခြင်း​နတ်​သမီး​ပြင်​သစ်​ရွှေ​ဒင်္ဂါး၊ ရွှေ​ကြက်ဖ​ပြင်​သစ်​ရွှေ​ဒင်္ဂါး တို့ တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။
န​ယူး​ဇီ​လန်​နိုင်ငံ​ကျ​တော့ သူ့​အထိမ်းအမှတ်​က ကျွန်း​ကို ယူထား​တာ​ပါ။ Niue ကျွန်း အမှတ်တရ​အနေ​နဲ့ န​ယူး​ဇီ​လန်​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​တွေ​မှာ တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ နိုင်ငံ​ရဲ့​ဆွဲ​ဆောင်​မှု​ဖြစ်​တဲ့ မစ်​တာ​တောင်ထိပ် – Mitre Peak ဟာ ခရီးသွား​လုပ်​ငန်း​အတွက် ဆွဲ​ဆောင်​မှု​ဖြစ်​သ​လို ရွှေ​ဒင်္ဂါးပေါ်​မှာ​လည်း ပုံ​နှိပ်ဖော်​ပြ​ကြ​ပါ​တယ်။ တစ်​ခြား န​ယူး​ဇီ​လန်​ရွေ​ပြား​တွေ​မှာ​တော့ ကာ​တွန်း​ပညာ​ရှင် ဝေါ​ဒစ်​စနေ ရဲ့​နာ​မည်ကျော် ကာ​တွန်း​ရုပ်​လေး​တွေ​နဲ့​မို့​လို့ ချစ်စရာ​ပါ။
စင်္ကာ​ပူ​နိုင်ငံ​ကိုယ်စား​ပြု ခြင်္သေ့​ခေါင်း​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​မှာ​တော့ အောက်​နား​မှာ ခွေး​ပုံ​သေး⁠သေး​လေး တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ ဒီ​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​တွေ​ကို ဈေး​ကွက်​ထဲ အစိုးရ​က ထုတ်ပေး​ခဲ့​တာ​ကို အမှတ်အသား​ပြု​တဲ့​အနေ​နဲ့ တရုတ်​နှစ်​သစ် ခွေး​သတ္တဝါ​ပုံ​ကို မှတ်တမ်း​တင်​ထား​တယ်​လို့ ဆို​ပါ​တယ်။ မျောက်​နှစ်​မှာ​မွေး​သူ​များ​အတွက် Singold Monkey ဆို​ပြီး ရှာ​ဝယ်​လို့ ရ​ပါ​သေး​တယ်။
အက်ပ်​မက်စ် စာ​မျက်နှာ​ရဲ့ နောက်​ပိုင်း​မှာ စက်​ဖြတ် လက်​ဝတ်​ရတနာ​တွေ​ပါ ဝယ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​ထဲ​မှာ
ရွှေ​ရင်​ထိုး – Gold Cuff Links
ရွှေ​ဆွဲ​သီး – Gold Pendants
ရွှေ​ဆွဲ​သီး​ကွင်း – Gold Bar and Coin ( Bezels )
ရွှေ​ဟမ်း​ချိန်း – Gold Pendant Chains
ရွှေ​ဆွဲ​ကြိုး – Gold Necklace
ရွှေ​နား​ဆွဲ၊ ရွှေ​နား​တောင်း – Gold Earring
ရွှေလက်ကောက်​ပျော့ – Gold Bracelet
ရွှေ​လက်​စွပ် ( ပ​လိန်း ) – Gold Ring နဲ့
ရွှေ​သော့တွဲ – Gold Key Rings ( ကီး​ချိန်း​ရှေ့​မှာ​ပါ​တဲ့ ရွှေ​ပြား​ကို သတ်သတ်​ဝယ်​ရ​မှာ​ပါ ) … စ,တာ​တွေ​ကို အသေး​စိတ်​ရှာဖွေ​နိုင်​ပါ​သေး​တယ်။
ရွှေ​အကြောင်း​ပြော​ရင်း ရွှေ​ဒင်္ဂါး​အကြောင်း​ရောက်​သွား​လို့ လမ်းမ​လွဲ​သွား​စေ​လို​ပါ​ဘူး။ ရွှေ​ကုမ္ပဏီ​တွေ​က အရုပ်​ကို အဓိက​ရောင်း​နေ​တာ​ကို​ကြည့်​ရင် သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ထိပ်​ဆုံး​စဉ်းစား​ရ​မှာ​က ရွှေ​ဝယ်​ရ​တဲ့​အကြောင်းရင်း​က ငွေ​ပို​လို့ ရွှေ​ဝယ်​စု​မှာ​လား? မြန်မာ​နိုင်ငံ​က​လို ဆင်ယင်​ချင်​လို့ ဝယ်​ဝတ်​တာ​လား? ရွှေ​ကို ကျ​ရင်​ဝယ်​ထား​မယ် တက်​ရင်​ပြန်​ရောင်း​မယ်​ဆို​ပြီး ရင်းနှီး​မြှုပ်​နှံ​ချင်​တာ​လားပေါ်​မူ​တည်​ပြီး အဖြေ​တွေ​က မ​တူ​နိုင်​ပါ​ဘူး။
ရွှေ​ဝယ်​စု​သူ​များ​က ဝယ်​ပြီး​ရင် မေ့​ထား​တဲ့​သဘော​ရှိ​ပါ​တယ်။ တွေ့​က​ရာ လှ​တ​ပ​တ​လေး​ဝယ်​လိုက်​လို့ စိတ်​ကျေနပ်​သွား​ရင် ဇာတ်​လမ်း​က ပြီး​သွား​ပါ​ပြီ။ ဘာ​အထိမ်းအမှတ် ညာ​အထိမ်းအမှတ်​အနေ​နဲ့ ဝယ်​သူ​များ​ရဲ့ ဈေး​ပို​ပေး​ဝယ်​သူ​များ​ရဲ့ အမြတ်​နဲ့ အွန်​လိုင်း​ရွှေ​ကုမ္ပဏီ​တွေ အသက်​ဆက်​ကြ​ပါ​တယ်။
ဝတ်​ချင်​သ​ပ​ဆို​ရင် ဒီ​နိုင်ငံ​မှာ​က ဟန်​ပြ​လောက်​ပဲ ဝယ်​ဝတ်​ကြ​တယ်။ မြန်မာ​အခေါ် ဖင်​စီ​ကွင်း​လေး​တွေ၊ ဆဲ​ကြိုး​လေး​တွေ၊ စ​တီး​ကြိုး​လေး​တွေ စ​တဲ့ တန်ဖိုး​နည်း​ပြီး သိပ်​မ​ထင်ပေါ်​အောင် ဆင်ယင်​ကြ​တယ်။ မြန်မာ​နိုင်ငံ​က ရွှေ​မြန်မာ​များ​ကတော့ ဒီ​လို​မဟုတ်​ပါ​ဘူး .. နာမည်​နဲ့​လိုက်​အောင် “ ရွှေ မှ ရွှေ ” ဝတ်​ချင်​ကြ​တယ်။ ဒီ​ဖက်​နိုင်ငံ​က ရွှေ​ဖုံးထား​တဲ့ – Coated တွေ မ​ကြိုက်​လို့ မြန်မာ​နိုင်ငံ​က​နေ တ​ကူး​တ​က​မှာ​ပြီး ဝတ်​ကြ​တယ်။
အလုပ်​ထဲ​မှာ လ​စာ​ထုတ်​ချက်လက်မှတ် – Paycheck တစ်​စောင်​ရ​ရင် ဘယ်လောက်​ပေး​မယ်​ဆို​ပြီး ချက်​ပေး ဝယ်​ကြ​တယ်။ လူ​ကြုံ​ရှိ​သူ​များ​က သယ်​လာ​တာ​ကို ကြား​ပွဲစား​က ငွေ​စိုက်​ရှင်း​ပြီး အမြတ်​တင် ပြန်​ရောင်း​တယ်။ ပြီး​လည်း​ပြီး​ရော အားလပ်​ရက်​ရ​တော့ ရန်ကုန်​ပြန်လည်​တဲ့​အခါ ကိုယ်​ဝယ်​ထား​တဲ့​ရွှေ​က မ​တရား ဈေး​ကြီး​နေ​ပါ​လေ​ရော။ ဘယ်​နေရာ ဘယ်​ဒေသ​ရောက်​ရောက် ပွဲစား နဲ့ မ​လွတ်​တဲ့ ဗမာ​တွေ​ပါ တကား..။
ရွှေ ဝယ်-ရောင်း လုပ်​ဖို့​က ရွှေ​ပြား – Gold Bar တွေ​ကို ဝယ်​ဖို့ တိုက်တွန်း​ချင်​ပါ​တယ်။ ဘာ​ပုံ​မှ​ပါ​ဖို့​မ​လို​ဘူး .. ရွှေ​စစ်​ဖို့​လို​တယ်၊ အလေး​ချိန်​မှန်​ရ​မယ်၊ ရောင်း​ချင်​ရင် ပြန်​ဝယ်​တဲ့ ကုမ္ပဏီ​မှာ ဝယ်​ရ​မယ်။ ပို့​ရင်​တော့ အများ​သူ​ငါ​ပို့​တဲ့ စာတိုက်​နဲ့ ပို့​လာ​တာ​မို့​လို့ စိတ်​နိုင်​မှ လုပ်​ဖို့ တိုက်တွန်း​ချင်​တယ်။
ရွှေ​ခဲ – Nugget မှာ​တောင် ပုံ​များ​ရင် ဈေး​က ပို​တယ်။ နာမည်ကြီး​ရင် ဈေး​ပို​တောင်း​တယ်။ ဘယ်​လို​ပဲ​နေ​နေ ကိုယ်​က​ဝယ်​လိုက်​ရင် သူ​က တစ်​ခါ​မြတ်​ပြီ၊ ပြန်​ရောင်း​ရင် ဝယ်​တဲ့​ကုမ္ပဏီ​ကို​ပဲ ပြန်​ရောင်း​ရ​တာ​မို့​လို့ ( ဒါ​က ပို​စိတ်ချ​ရ​တယ် ) သွင်း​ဈေး​နဲ့ ပြန်​ကောက်​ပြန်​ရော..။ အဲ​ဒီ​တော့ အဝယ်​ရော အရောင်း​ရော သူ့​စိတ်​ကြိုက်​ချည်း​ပဲ​ဆို​တာ သတိထား​ရ​မယ်။
ဒီ​လို​အရောင်းအဝယ်​လုပ်​ဖို့ ကိုယ့်​ဘဏ်​စာရင်း​မှာ စာရင်း​ရှင် – Checking Account ရှိ​ရ​ပါ​မယ်။ အကြွေးဝယ်​ကဒ် – Credit Card နဲ့ ဝယ်​ရင် ဈေး​အများ​ကြီး​ပို​တယ်။ ကိုယ့်​ငွေ​ကိုယ်​ပြန်​သုံး​တဲ့ Debit Card သုံး​ရင်​လည်း အပို​ဆောင်း​ငွေ – Charge ယူ​တာ​ပါ​ပဲ။ ချက်လက်မှတ်​ပို့​ပြီး ဝယ်​ရင်​တော့ မ​ရ​တာ မဟုတ်​ဘူး .. ရ​တယ် .. စောင့်​ရ​တယ်။ ချက်​က ကုမ္ပဏီ​ဆီ​မ​ရောက်​သေး​ဘူး ရွှေ​ဈေး​ပြောင်း​နေ​ရင် ရှင်း​ရ​မယ့် ကိစ္စ​တွေ ရှိ​နိုင်​တယ်။
အကောင်း​ဆုံး နဲ့ အမြန်​ဆုံး​ဝယ်​နည်း​ကတော့ နိုင်ငံ​ချင်း​ဘဏ်​က​နေ​လွှဲ​တဲ့ Wire စံ​နစ် ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အခု ကိုယ်​က ပို့​လိုက်​ရင် နေ့ချင်း ကုမ္ပဏီ​ဆီ ငွေ​ရောက်​တယ်။ ဒါ​ဆို သူ​တို့​လုပ်ကိုင်​ဖို့ Processing Time အချိန်​ကာလ​တစ်​ခု​ကို​စောင့်​လိုက်​ရင် ကိုယ့်​ဆီ ပို့ – Ship လာ​တာ ပို​မြန်​တယ်။ နှစ်​ကုန်​ခါ​နီး​လို့ အခွန်​ပြဋ္ဌာန်း – Tax Return လုပ်​တဲ့​အခါ ရွှေ​အရောင်းအဝယ်​လုပ်​လို့ ငွေ​ရှုံး​ထား​ရင် အခွန်​ကြေငြာ​ခွင့်​ရှိ​ပါ​တယ်။
ငွေ​ပို​နေ​လို့ ဘဏ်​အပ်ထား​ရင် ငွေ​တိုး​နည်း⁠နည်း​ပဲ​ပေး​တယ်။ ရွှေ​ဝယ်​ထား​ရင် အရင်းအနှီး​ကြီး​တယ်။ ကုမ္ပဏီ​တွေ​က ဝယ်​ဈေး နဲ့ ရောင်း​ဈေး အနည်း​ဆုံး ဒေါ်လာ ( ၄​ဝ ) လောက် ခွာ​ဖြတ်​ကြ​တယ်။ တစ်​ကယ်​ဝယ်​မယ်​ဆို​ရင်​လည်း အပေါ်​က ရေးထား​တာ​တွေ​ဖတ်​ပြီး “ ရွှေ​ဝယ်​မှာ​လား? အရုပ်​ဝယ်​မှာ​လား? ” သေသေချာချာ စဉ်းစား​စေ​ချင်​တယ်။ ဒီ​တော့ ကိုယ်​က​ပဲ ရွှေ​အရောင်းအဝယ်​လုပ်​နိုင်​မ​လား .. ရွှေ​ကုမ္ပဏီ​တွေ​ပဲ​ချမ်းသာ​ကြ​မ​လား လွန်ဆွဲ​ပွဲ​မှာ​တော့ “ နိုင်ငံ​ခြား​မှာ ရွှေ​ကံ​စမ်း​သူ​တွေ​ဟာ စွန့်စား​မှု​အပြည့်​နဲ့​ပါ ” ဆို​တာ လေ့​လာ​တင်ပြ​လိုက်​ရ​ပါ​တယ်။
Credit to koko2yeye@gmail.com’
Next post လက်​ဖြန့်​သူ​တွေ​နှင့် မြန်မာ​ပြည်
Previous post “ချမ်းသာ​ပြီး ရုပ်​ဆိုး​သူ” သို့မဟုတ် “ရုပ်​ချော​ပြီး အလုပ်အကိုင်​မ​ရှိ​သူ” ကို ဘယ့်​သူ့​ရွေး​မ​လဲဆို​တာ စစ်တမ်း​ကောက်ယူ